बेल्जियम पहिलो पटक विश्वकपको तेस्रो स्थानमा, पूर्वविजेता इंग्ल्याण्ड २-० ले स्तब्ध ! – Everest Dainik – News from Nepal
बेल्जियम पहिलो पटक विश्वकपको तेस्रो स्थानमा, पूर्वविजेता इंग्ल्याण्ड २-० ले स्तब्ध !
काठमाडौं, असार ३१ । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा बेल्जिएमले पहिलो पटक तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । उसले पूर्वविजेता इंग्ल्याण्डलाई २ ० गोलले हराउँदै पहिलो पटक विश्वकपको तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो । विश्वकपमा बेल्जियमको यो अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो । पहिलो पटक सन् १९८६ मा सेमिफाइनलमा पुगेको बेल्जियम पराजित भएको थियो ।
बेल्जियमलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउन कप्तान इडेन हजार्ड र थोमस म्युनिरले गोल गरे । खेलको चौथो मिनेटमा गोल गर्दै म्युनिरले अग्रता दिलाएका थिए । ८२ औं मिनेटमा हजार्डले अर्को गोल थप्दै बेल्जियमको जित सुनिश्चत गरेका हुन् । सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग १-० ले पराजित भएपछि बेल्जियमको उपाधि यात्रा टुङ्गिएको थियो । इंग्ल्याण्ड क्रोएसियासँग पराजित भएको थियो । इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले हराउँदै क्रोएसियाले भने पहिलो पटक विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
इंग्ल्याण्ड र बेल्जियम समूह चरणमा एउटै समूहमा थिए । समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि बेल्जियमले इंग्ल्याण्डलाई १-० ले पराजित गरेको थियो । यस्तै इङल्याण्डका कप्तान ह्यारी केन भने गोल्टेन बुटको नजिक पुगेका छन् । उनको नजिक रहेका रोमेलु लुकाकुले गोल गर्न सकेनन् ।
केनको ६ र लुकाकुको ४ गोल रहेको छ । अब फ्रान्सका ग्रिजम्यान र एम्बाप्पेको समान तीन गोल छ । उनीहरुले आइतबारको फाइनलमा चमत्कार गरे मात्रै केनलाई भेट्न सक्ने छन् । जुन न्यून छ ।
सन् १९६६ मा उपाधि जित्नुबाहेक इंग्ल्याण्डले सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेको विश्वकप भनेको सन् १९९० मा हो। त्यतिबेला इंग्ल्याण्ड चौथो स्थानमा आएको थियो। फाइनलमा पुगेका फ्रान्स र क्रोयसिया भने आज उपाधीका लागि भिड्ने छन् । -एजेन्सी
ट्याग्स: Belguam, england, Fifa world cup 2018